Edirnekapi | RayHaber | raillynews
Goormaa imtixaanku ku socon doonaa khadka Marmaray?
Goorma ayuu wadista tijaabadu ka bilaabmayaa khadka Marmaray? Dhismaha dhismaha 13.6 km marinka tuubbooyinka Bosphorus ayaa la dhammeystirey. 27.2 km ee xNUMXkm jidadka tareenka ayaa la saaray. Mashruuca qarniga ayaa ah kii ugu dambeeyay ee Marmaray. qaadashada [More ...]
Marmaray iyo Istanbul Ankara YHT?
Sidee Marmaray iyo Istanbul Ankara YHT? Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Binali Yıldırım wuxuu martida u ahaa barnaamijka "Ankara ee Agenda" oo uu soo diyaariyay oo uu soo bandhigay Wakiilka TGRT Haber Ankara Batuhan Yaşar. Wasiirka Yıldırım, [More ...]
Hagaha isticmaalka Metrobus
Metrobus, oo ah nolosheena, waxay na siisaa faa iidooyin muhiim ah xagga gaadiidka. Ma dafiri karno tan, laakiin waxaa lagu doodi karaa sida raaxada leh ee safarkayagu yahay maadaama waqtiga imaatinkeennu soo gaabiyo Ka sokow, markasta oo aan rabno Pat [More ...]
Dawladda Hoose ee magaalada Istanbul ee dhoobada weyn ee macaawino ayaa codsatay muwaadiniinta
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul, safarka cusub ee ajendaha cusub ee metroobus ayaan ajandaha loogaga hadlin sidii socod dhab ah loogu fasiray inuu yahay lugayl. Kadib shirkii Isutagga Isuduwaha Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada (UKOME) [More ...]
Dhibaatooyinka Metrobus ma joojiyaan cabashooyinka
Ma jiro maalin keliya oo aynaan helin wax cabashooyin ah oo ku saabsan shirkadda BRT. Caddaalad darro, cufnaan aan dhammaad lahayn, rakaabku hadda way dhibaataysan yihiin. Muddo sanado ah, habab kala duwan ayaa la isku dayay magaca xalka, laakiin taasi ma dhicin [More ...]
Metrobus ayaa ku dhuftey wadada baabuurna ku dhuftey iyo baabuur curyaan ah
Metrobus waxay ku dhacday wadada E-5 sababtoo ah taayir la siman oo ku yaal Mecidiyeköy, Istanbul, dadka 1 ayaa dhaawacmay. Mecidiyeköy Söğütlüçeşme-Edirnekapı duulimaadka metrobüsun, dartiis qaraxii taayirka ayaa ku dhacay gaari wadada kala go'ay. baabuur [More ...]
MAALINTA Habibler - Khadka Topkapi
17 Gawaarida T2007, oo loo xilsaaray Sebtember 4 isla markaana u adeegta inta u dhaxaysa Şehitlik-Mascid-i Selam iyo 18 bishii Maarso 2009, waxay adeegaysay xariiqda 15,3 km ka dib markii masraxa Edirnekapı-Topkapı la galiyay. T4 [More ...]